Panthenol, Polyquaternium, Pvp Polymer, Waxyaabaha ay Ka Kooban Tahay Daryeelka Shakhsiyeed - Y&R
Y & R, waxay ka diiwaan gashan tahay Tianjin Free Trade Zone (FTZ), shirkadda waxaa dib looga abaabulay Kingchem International Ltd oo markii ugu horeysay la aasaasay sanadkii 2012. Waxaan ku howlan nahay soo saarista iyo qeybinta noocyo kala duwan oo takhasus gaar ah leh, alaabta ceeriin, waxyaabo lagu daro , dhexdhexaadiyeyaasha iyo dareeraha loo yaqaan 'global makeup' / daryeelka shakhsiyeed, dawooyinka, cuntada, H & I iyo warshadaha kale ee Hi-Tech.
Waxaan marwalba raadineynaa 'Mutural Trust & Sharing, Mutual Cooperation & Benefits', waxaanan sameyneynaa dadaalkeena si aan u gaarsiino alaabooyin gaar ah, adeeg la-hawlgalayaashayada.
Waxaan diirada saareynaa soo saarista iyo keenista Fiitamiinada, PVP Polymers iyo Pyrrolidone oo ku saleysan dareerayaal / dhexdhexaad, PVM / MA Copolymers, Kojic Acid dipalmite iyo iwm
Y & R (YNR) had iyo jeer waxaa ka go'an inay hirgeliso istiraatiijiyadda horumarka aan la beddeli karin, oo diiradda lagu saaray wada noolaanshaha aadanaha iyo dabeecadda si loogu dadaalo abuuritaanka hab horumarineed oo ilbaxnimo leh.
Markii Ugu Horaysay La Aasaasay
Jawaab iyo Adeeg
Y & R, waxaa laga diiwaangaliyay aagga ganacsiga xorta ah ee Tianjin ...
Shirkadda waxaa dib looga abaabulay Kingchem International Ltd oo markii ugu horreysay la aasaasay 2012.
152020 / Sebt
Nooca Cusub Polyquaternium-11 Grandly La ...
Nooca Cusub Polyquaternium -11 Si Weyn Loo Daahfuray Tradional Polyquaternium-11 wuxuu la socdaa qiyaastii. 20% maaddo adag oo leh culeys molikal sare. Si loo daboolo baahida suuqa, waxaan soo bandhigeynaa Polyquaternium-11 50%. Polyquaternium-11 waa cusbada qubeyska 'polymeric ammonium cusbada' ee ay sameyso falcelinta diethyl ...
042020 / Sebt
KHATAR GAAR AH Wixii DL-Panthenol Powder
Waxaan u soo bandhigeynaa qiimo aad u qaas ah DL-Panthenol Powder USP Grade inta lagu guda jiro Sep.01,2020 ilaa Sep.30,2020.Waxaad heli doontaa jawaab celin dhakhso leh faahfaahinta mar alla markii aad noo soo dirto wixii codsi ah. DL-Panthenol waa humectants weyn, oo leh qaab budo cad, lagu milmi karo biyaha, aalkolada, propylene glycol.DL-Panthen ...